Caanaha dameerka oo suuq fiican ka helay waddanka Albania! | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Caanaha dameerka oo suuq fiican ka helay waddanka Albania!
Caanaha dameerka oo suuq fiican ka helay waddanka Albania
Albania (Halqaran.com) – Dadka deegaanka ayaa ku xooma beero yar yar oco lagu xannaaneeyo dameerada oo ku yaalla koonfurta magaalada Tirana ee dalka Albania, halkaas oo xuddun u ah iibka caanaha xayawaankaasi.
Elton Kika oo ah 37-jir beer lagu hayo 12 dameer ku leh magaaladaasi ayaa sheegay dalabka caanaha dameerku iney xoogeysteen wixii ka danbeeyay markii caabuqa COVID-19 uu gaaray waddanka Albania.
Halkii litir ee caanaha dameerka ayaa lagu iibiyaa 50 euros oo u dhiganta $61.29, qiimahaasi ayaana ah mid sarreeya marka loo eego dakhliga soo gala dadka u dhashay waddankaas oo lagu qiyaasay 400 oo euros bishii, sida uu daabacay Gulf Today.
Inkastoo uusan jirin cilmi seynisku sheegay, haddana dadka reer Albania waxa ay rumeysan yihiin in caanaha dameerka ay ku jiraan nafaqo la mid ah tan caanaha hooyada taasoo xoojisa habdhiska difaaca jirka.
Marka laga soo tago in caanaha dameerka ay cabbaan, haddana waxay ka sameystaan saabuun iyo waxyaabo kale oo loo adeegsado isqurxinta.
Suuq fiican ka helay